အပါယ်သြဂ ဆွဲချမည့်သူ | မေတ္တာရိပ်
← ကပ် (၃) ပါး
နူနာသည်နှင့်တူသော ကိလေသာ →
အပါယ်သြဂ ဆွဲချမည့်သူ	Posted on October 10, 2009	by mettayate မာရ်နတ် (၅)ပါး အကြောင်း ကိလေသာမာရ်အကြောင်းကို တင်ပေးထားသော်ငြားလည်း ခုပို့စ်ကတော့ အဲ့ဒီကိလေသာ (၁၀) ပါးထဲမှာ ကျမတို့ကို အပါယ်ဆွဲချတဲ့ ကိလေသာအကြောင်းကို တင်မှာပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိလေသာ (ကိလေသ ဆိုတဲ့ ပါဠိက လာတာပါ။) မြန်မာလိုပြည့်စုံအောင် ဘာသာပြန်ရင် “စိတ်ကို ပူလောင်ကြောင်းတရား၊ စိတ်၏ ညစ်ညူးကြောင်းတရား” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ကိလေသအကျဉ်း ၁၀ ပါး (အပြား ၁၅၀၀) ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက –
လောဘ – သက်ရှိဖြစ်စေ၊ သက်မဲ့ဖြစ်စေ တပ်မက်စွဲလမ်းခြင်း၊
ဒေါသ – စိတ်ဆိုးခြင်း၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၊ အာဃာတထားခြင်း၊
မောဟ – အမှန်ကို မသိခြင်း၊ တွေဝေခြင်း၊
မာန – ငါသိ၊ ငါရှိ၊ ငါတတ်ဟု ထောင်လွှားခြင်း၊
ဒိဋ္ဌိ – ငါရှိတယ်၊ သူရှိတယ်၊ ယောကျာ်းမိန်းမရှိတယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါရှိတယ်ဟု အယူမှားခြင်း၊
၀ီစိကိစ္ဆာ – ငါဟူသည် အရင်ကဖြစ်ခဲ့သလား၊ အခုလဲဖြစ်ဆဲလား၊ နောင်လဲဖြစ်ဦးမှာလားဟူ၍ မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း၊
ထိန – စိတ်၏လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ၀ိပဿနာတရားရှုပွားလျှင် နာကြားလျှင် ခဏနှင့်ငိုက်မြည်းလာခြင်း၊
ဥဒ္ဓစ္စ – တရား၌ အာရုံမရောက်ဘဲ စိတ်ပျံ့လွင့်ခြင်း၊
အဟိရိက – အကုသိုလ်တရားကို လုပ်ရမှာ မရှက်ခြင်း၊
အနောတ္တပ္ပ – အကုသိုလ်တရားကို လုပ်ရမှာ မကြောက်ခြင်း။
ထိုကိလေသာ (၁၀) ပါးထဲမှာ ဘယ်ကိလေသာသည် အကြောက်ဆုံးကောင်းသည်ဟု မေးလျှင် လူတော်တော်များကတော့ လောဘ၊ ဒေါသ လောက်သာ ဖြေကြမည် ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တကယ် အပါယ်လေးပါးကို ဆွဲချမည့်သူကတော့ ဒိဋ္ဌိ ကိလေသာ သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရမတ္ထဒီပနီဋီကာ မှာ –
“သဗ္ဗာနိစ အပါယဂါမီကမ္မာနိနာမ အတ္တဒိဋ္ဌိယာ သတိယာ ဧ၀ ၀ိပစ္စန္တိ၊ အသတိယာနိဝိပစ္စန္တိ”
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ -” အပါယ်လေးပါးဆွဲချမယ့် အကုသိုလ်ကံတွေ ဘယ်လောက်ရှိရှိ ငါစွဲသူစွဲ ၀ိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့ စွဲတဲ့ အတ္တဒိဋ္ဌိရှိမှ အပါယ်လေးပါးကျတာပါတဲ့။ အတ္တဒိဋ္ဌိ မရှိရင်တော့ အပါယ်လေးပါးမကျပါဘူးတဲ့။”
ဆရာတော် ဦးဇ၀န ဥပမာပေးတာကတော့ ဒိဋ္ဌိကိလေသာဟာ ရထားခေါင်းတွဲနဲ့တူပြီး ကျန် ၉ပါးသောကိလေသာကတော့ လူစီးတွဲနဲ့တူပါတယ်တဲ့။ ခေါင်းတွဲမရှိရင် ကျန် ၉ တွဲကလည်း ရွေ့လျားလို့မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒိဋ္ဌိကိလေသာမရှိရင် ကျန် ၉ပါးသော ကိလေသာ အပါယ်ဆွဲချပေမယ့် မကျတော့ပါဘူး လို့ မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။
ကျောင်းအမကြီး ၀ိသာခါဟာ ၇နှစ် သမီးအရွယ်မှာ သောတာပန်တည်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတော့ ပုဏ္ဏ၀ဎုန ဆိုတဲ့အမျိုးသားနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပါတယ်။ ဒါဆိုသူ့မှာ တပ်မက်စွဲလန်းတဲ့ လောဘတဏှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ တခါ သား ၁၀ ယောက်၊ သမီး ၁၀ ယောက်။ ထိုသားသမီးမှ မြေးလေးရာ။ ထိုမြေးလေရာမှ မြစ်ရှစ်ထောင်ရှိပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ မြစ်ရှစ်ထောင်တည်းက တစ်ယောက်သောမြေးသေလို့ ငိုကြွေးတာ။ ဒါကို ဒေါသ လို့ အမည်တပ်ပါတယ်။ လောဘ ဒေါသတွေရှိပေမယ့် ၀ိသာခါကို အပယ်ဘုံဆွဲမချဘဲနဲ့ နတ်ပြည်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါစွဲ ဒိဋ္ဌိမရှိလို့ပါပဲ။
ဒိဋ္ဌိ ကိလေသာမှာ ၆၂ ပါး ရှိပါတယ်။ အမျိုးအစားအရ ခွဲခြားလိုက်ရင်တော့ နှစ်မျိုးနှစ်စား ရပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ရုပ်နာမ်ကိုမြဲတယ်လို့ ယူဆတဲ့ သဿတဒိဋ္ဌိ နှင့် သေလျှင်ပြတ်တာပဲ ဘာမှမရှိဟု ယူဆသော ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိပါပဲ။ ရုပ်နာမ်ကိုမြဲတယ်လို့ ယူဆတဲ့ သဿတဒိဋ္ဌိ ကနေ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ နဲ့ အတ္တဒိဋ္ဌိ တို့ ပေါက်ဖွားလာကြပါတယ်။
သေလျှင်ပြတ်တာပဲ ဘာမှမရှိဟု ယူဆသော ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ ကနေ ကုသိုလ်၊အကုသိုလ် ထိုကုသိုလ် အကုသိုလ်သိုလ်တွေရဲ့အကျိုးကို ပယ်တဲ့ အဟေတုကဒိဋ္ဌိ၊ အကိရိယဒိဋ္ဌိ နဲ့ နတ္ထိဒိဋ္ဌိ တို့ ပေါ်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဖြစ်မြင်ရင် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ စင်တယ်။ အပျက်မြင်ရင် သဿတဒိဋ္ဌိ စင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဒိဋ္ဌိကိလေသာ (၆၂) လုံးလုံးကို တစ်ခုချင်းဖြုတ်ရမှာလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ အားလုံးကို လိုက်ဖြုတ်စရာ မလိုပါဘူး။ အသီးတစ်ရာ အညှာတစ်ခု ဆိုတဲ့အတိုင်း အညှာဖြစ်တဲ့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ရင် ကျန်တဲ့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိကပေါက်ပွားလာတဲ့ ၆၂ပါးသော ဒိဋ္ဌိကို ဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒါ့ကြောင့် ဗုဒ္ဓက သံယုတ်ပါဠိတော်မှာ –
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ – ရင်ဝလှံစူးသူက လှံကိုမြန်မြန်နှုတ်ထုတ်ရသလို၊ ဦးခေါင်းမီးလောင်နေတဲ့သူကလည်း မီးကိုမြန်မြန်ငြိမ်းသတ်ရသလို ၀ိပဿနာတရားရှိတဲ့ယောဂီတစ်ယောက်ဟာလည်း သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြီးကို မြန်မြန်နှုတ်ပစ်ပါလို့ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ သမုစ္ဆေဒဟာန် ဖြင့် ပယ်သတ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
အရိယာမဖြစ်သေးသောကြောင့် တဒင်္ဂပဟာန်၊ ၀ိက္ခမ္ဘနပဟာန်တို့ဖြင့် ပယ်သတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်။
ဒါန၊ သီလ။ ဘာဝနာ မည့်သည့်ကုသိုလ်ပဲလုပ်လုပ် ပစ္စုပ္ပုန်သံသရာနှစ်ဖြာလုံးမှာ ငါကောင်းစားထင်ပေါ်ရေးကို ဦးစားမပေးဘဲ သူတစ်ပါး (ပရဟိတ) ကောင်းစားရေးကို ဦးစားပေးရန်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
ထို့ကြောင့် တရားအားထုတ်ရာမှာ တဏှာ၊ ဝေဒနာ စသည်တို့ကို အရင်သတ်စရာမလိုပါဘူး။ သတ်လို့လည်း မရပါဘူး။ တဏှာက အနာဂါမ်တည်သည်အထိ လိုက်ဒုက္ခပေးနေတုန်းပါပဲ။
ကာမတဏှာကို အနာဂါမိမိဂ်က သတ်ပြီး ဘ၀တဏှာကို ရဟန္တာရောက်မှ သတ်တာပါ။ ခန္ဓာရှိသမျှ ဝေဒနာ ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။
မိုးညှင်းဆရာတော် ဘုရားကြီးကလည်း –
“ဒိဋ္ဌိမသတ်၊ တဏှာသတ်၊ မပြတ်သံသရာ၊
တဏှာမသတ်၊ ဒိဋ္ဌိသိတ်၊ ပြတ်သံသရာ။” လို့ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။
“အပါယ်မကျအောင် တားမည့် ကုသိုလ် (၇)မျိုး”
၁) ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးစွဲမြဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အပါယ်မလားပါ။
၂) ငါးပါးသီလမြဲတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အပါယ်မလားပါ။
၃) အာရုံဆွမ်း နေ့ဆွမ်း နေ့စဉ်မပြတ်လှူဒါန်းသူ တိုင်း အပါယ်မလားပါ။
၄) စာရေးတံမဲ လှူဒါန်းသူတိုင်း အပါယ်မလားပါ။
၅) ၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း အပါယ်မလားပါ။
၆) ရေတွင်းရေကန်လှူတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း အပါယ်မလားပါ။
၇) သံဃိယကျောင်းဆောင် လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အပါယ်မလားပါ။
အညွန်း – လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ၀ိပဿနာအတွဲ ၁ နှင့် ၂စာအုပ်၊
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ကပ် (၃) ပါး